पौल शाह, बर्षा सिवाकोटी, नाजिर हुसेन को नयाँ गीत -कती राम्रो गीत -
पौल शाह, बर्षा सिवाकोटी, नाजिर हुसेन को नयाँ गीत -कती राम्रो गीत
२०७५, १९ पुष बिहीबार १८:०३ January 3, 2019 clickonLeaveaComment on पौल शाह, बर्षा सिवाकोटी, नाजिर हुसेन को नयाँ गीत -कती राम्रो गीत
तपाई सबै लाई धेरै नै चर्चित चलचित्र बीर बिक्रम याद त छ होला। अब सोही चलचित्र को अर्को भाग को रुप मा बीर बिक्रम -२ अाउदैछ जस्मा नया युवा कलाकार हरु रहेकाछन। हालै मत्र उक्त चलचिय्त्र को गित युटुब मा सार्बजनिक गरिएको छ जस्को बोल “पिरतीको मिठो तिर्शना” भन्ने रहेको छ। यो गित पुरानो गित पिरतीको मिठो तिर्शना को रिमिक्स भन्दा पनी हुन्छ। मिलन चाम्सले निर्माण र निर्देशन गरेको चलचित्र ‘बिर बिक्रम २’ अहिले सर्बत्र चर्चा को बिषय बनेको छ।
उक्त गित को भिडिओ हेर्दा गित धेरै नै राम्रो बनेको देखिन्छ। गित को कुरा गर्दा गित मा स्वर तारा प्रकाश लिम्बु र मेलिना राईको रहेको छ। गीतमा वास्तविक स्वर इन्द्रजीत मिजार र भारती घिमिरेको रहेको छ। गीतमा सङ्गीत रन्जीत गजमेरको रहेको छ।
यस गित मा अहिले का चर्चित कलाकार हरु पौल शाह, बर्षा सिवाकोटी, नाजिर हुसेन लाई फिचर्ड गरिएको छ। भिडिओ को छायान्कन धेरै नै उतक्रिस्ट देखिन्छ। तिनै जना कलाकार हरु धेरै नै ज्वलन्त देखिन्छन। चलचित्र मा कलाकार हरु को कुरा गर्दा पौल शाह, बर्षा सिवाकोटी, नाजिर हुसेन, बुद्दी तामाङ, देश भक्त खनाल, बिनिशा भन्डारी, बिनोद सुबेदि खत्री र अन्य महत्वोपुर्ण कलाकार हरुको भुमिका रहेको छ।
चलचित्र को निर्देशन मिलन चाम्स ले गरेका छन भने निर्माण पनि उन्कै रहेको छ। सङित रन्जित गज्मेर, तारा प्रकाश लिम्बु, राजन राज सिवाकोटी ले दियेका छन। चलचित्र चाडैनै प्रदशन मा अाउदैछ।
गीत तल हेर्नुहोस
आरोपित् कसरी सांसद ? नियमले के भन्छ ?
वाइडबडी प्रकरणमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार्य छैन : प्रबक्ता गोकुल बाँस्कोटा
सारा अली खानले गरिन निकै बोल्ड फोटोसुट (तस्बिर)
२०७५, २२ चैत्र शुक्रबार १३:१६ April 5, 2019 clickon
नेहा कक्कडको श्रीमानलाई लिएर यस्तो डिमान्ड !
२०७६, १८ असार बुधबार १०:३४ July 3, 2019 clickon
नायिका करिश्मा मानन्धरले एसईईमा ल्याईन ‘बी प्लस’
२०७६, १२ असार बिहीबार १७:४१ June 27, 2019 clickon